दातृ निकायहरुले दिन खोजेको जति भित्र्याउन सकेनन् : नरेन्द्रकुमार गुरुङ
२०७२ सालको भुकम्पले ३१ वटा जिल्लामा रहेको गुम्बाहरु क्षतिग्रस्त भएको हो । भुकम्प गएको ३ बर्ष हुँदा पनि साँस्कृतिक सम्पदाको पुननिर्माण हुन सकिरहेको छैन । कतै कतै नगन्यरुपमा मात्र भएको छ । भुकम्पले १३ सयभन्दा बढी गुम्बाहरु क्षतिग्रस्त बनाएका हुन् । पुननिर्माणसम्बन्धी बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिका सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र कुमार गुरुङसँग अर्जुन तामाङ र सन्तोष योञ्जनले गरेको कुराकानीः
भुकम्पपछिको गुम्बाहरु पुननिर्माण कार्य कसरी अगाडी बढाइरहनु भएको छ ?
देशभर ४ हजार ५ सय गुम्बाहरु छन् । यिनै मध्ये १३ सय १८ गुम्बा प्रारम्भिक चरणमा क्षतिग्रस्त भएको पायौं । त्यसबाट छनौट गरी गुम्बा विकास संचालका समिति, गुम्बाको दस्तावेज र गाविस सचिवहरुको रिपोर्ट अनुसार ९३० पुर्ण क्षति भएको पायौं । पुननिर्माणको लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले ४१ करोड पहिलो बजेट छुट्याइएको छ । ऋीएक्ष् ले छनौट गरी सामान्य गुम्बा बनाउन ५१ लाखदेखि १ करोडससम्म दिने प्रावधान बनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित गुम्बा÷बिहारहरूको संरक्षण, जीर्णोद्वार तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ पारित गरेपछि गुम्बा÷बिहारहरूको पुनर्निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो ।
गुम्बा बिकास समिति कसरी अनुगमन गर्नु भएको छ कि ?
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र गुम्बाले कन्साल्टेन्सीलाई साथ लिएर काम सुरु गरेको छ । गुम्बाको सबै आवश्यक विवरण यस संस्थाले भदौ भरिमा रिपोर्ट तयार पार्छ । त्यसपछि गुम्बाको अवस्था हेरेर कति बजेट दिनुपर्ने हो, त्यसको ब्यवस्था हुनेछ ।
कन्साल्टेन्सीले कुन आधारमा पुनःनिर्माणको खाका तयार पार्छ त ?
पहिले जस्तो छ त्यस्तै आकारको बनाउने प्रावधान बनाएको छ । कन्साल्टेन्सीले आइप्याड, ल्यापटप लिएर फिल्डमा जान्छ । जे छ त्यही रिपोर्ट गुम्बा बिकास समितिलाई तुरुन्त पठाउँछ । पहिला आइसकेको गुम्बाहरुको विवरण पनि फेरि स्थलगत अनुगमन गरी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा पठाउँछौं । त्यसबाट पास भएपछि मात्र पुननिर्माण हुनेछ । दोस्रोपटक यसपाली १ अर्ब बजेट छुटयाइएको छ ।
दातृ निकायहरुले पनि सहयोग गरेको कुरा आएको छ नि ?
भारतले आफ्नो दुतबासमार्फत १ खर्ब डलर साँस्कृतिक सम्पदाको नाममा छुट्याइएको रहेछ । त्यसमा गुम्बा मठ मन्दिर लगायत सबै पर्छन् । तर त्यसमा नेपाल सरकारले सहमति गर्न नसक्दा त्यतिकैमा थन्किएको छ । भारत दु्ताबासले आफै अघि सरेर ५ करोडभन्दा मुनिको चाहिं बनाइदिने प्रावधान गरेको थियो । मलाई केही गुम्बाहरुको नाम पनि मागेको थिए ।
अरु देशहरुको पनि सहयोग छ ?
अरु देशहरुले सहयोग गर्न चाहेको थियो । तर हाम्रो सरकारले उनीहरुको मापदण्ड र सीमामा रहेर सम्झौता गर्न सकेनन् । त्यसले गर्दा दातृ निकायहरुले दिन खोजेको जति भित्र्याउन सकेनन् ।
तत्कालै पुननिर्माणको लागि तपाईले पहल गर्नुभएको थियो तर सरकारले वास्ता गरिरहेको थिएन नी ?
हाम्रो समितिले पहल तत्कालै गरेको हो । राष्ट्रपतिदेखि राजनितिक दलसम्मकालाई अनुरोध गरेको थियो । तर कतिपयलाई यसको महत्व थाहा नहुँदा छिटो निर्माण हुन सकेन । सबैको प्राथमिकतामा नपरेपछि ढिलाई भएको हो । गुम्बा केही समुदायको जीवन र साँस्कृतिक पद्धतिसँग गाँसिएकोले यसको महत्व धेरै छ । तर यो महत्वलाई तत्कालिन सबैले बुझ्न सकेन ।
अहिलेसम्म कति गुम्बाको सम्झौता भएको छ ?
३ सय गुम्बाको नाम राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस गरी पठाएको छ । सायद ८–१० वटा सम्झौता भइसकेको छ । पुननिर्माणमा आएको बजेट फ्रिज हुदैन । यसपाली नभए अर्काे बर्षमा बनाउन मिल्छ । प्रक्रिया लामो हुँदा थोरैले मात्रै अख्तियारी पाएको हो । प्रक्रियाहरु छोट्याउने कोशिसमा छौ ।
गुम्बा ब्यक्तिको नभएर साझा सम्पति एवं सम्पदा भएको हुँदा यसलाई संरक्षण संम्बद्र्धन गर्नु सबैको दायित्व हो । यसमा मिडिया, सरोकारवाला निकाय र जनताले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।